Mareykanka oo dib u furanaya Safaaradiisii dalka Ukraine | Universal Somali TV
Dowladda Mareykanka ayaa ku howlan, sidii ay dib ugu furan laheyd Safaaradeedii Magaalada Kiev, oo ku xirtamay duulaanka Ruushka ee dalkaasi.
Tani ayaa waxay ka dambeysay, ka dib markii Moscow ay ku guuldareysatay inay qabsato magaalo madaxda Kiev, ayna hawlgalkeedii u weecisay dhanka bariga dalkaasi, sida Gobolada Luhansk iyo Donetsk oo tan iyo sanadkii 2014 ay ka dagaalamayeen xoogaga gooni-goosadka ee Ruushka uu taageero.
Wadamada Reer Galbeedka ayaa diblomaasiyiintooda kala baxay Kiev, markii uu bilowday duulaanka Ruushka, 24-kii bishii February ee sanadkan. Muddadaasi waxay diblomaasiyiinta Mareykanka ay si ku-meel-gaar ah ugu shaqeynayeen magaalada xuduudda Poland ku dhow ee Lviv.
Saraakiil sarsare oo ka tirsanaa Safaaradda Mareykanka ee Kiev ayaa gaaray magaaladaasi, iyagoo fulinaya amarkii Madaxweyne Joe Biden, ee ahaa in dib loo hawlgeliyo Xarunta Safaaradda.
Ra'iisal Wasaaraha Canada, Justin Trudeau ayaa Axaddii booqasho aan la sii shaacin ku tegay Magaalada Kiev, isagoona dib u furay Safaaradda Canada ee dalkaasi.
Ra'iisal Wasaare Trudeau ayaa bartisia Twitter-ka ku sheegay "Calanka Canada ayaa mar kale ka dul babanaya Safaaradda Canada ee Kiev. Waxaan kor u qaadnay, si aan u muujino soo noqoshada rasmiga ah ee jooggitaanka diblomaasiyadeed Canada ee Ukraine.
Waxaan si toos ah u soo aragnay arxan la'aanta dagaalka sharci darrada ah ee Putin. Ciidamada Ruushka waxay dileen dad rayid ah, waxay burburiyeen guryo, waxayna dhulka la simeen xaafado dhan. Canada waxay hubin doontaa in lagula xisaabtamo dembiyada dagaal, ee ay gelayaan."
Sidoo kale Dowladda Ingiriiska ayaa la filayaa in maalmaha ina soo aaddan ay dib u furato Safaaradeeda Magaalada Kiev.
Reer Galbeedka oo horey hub iyo dhaqaaleba u siinayay Ukraine, si ay isaga caabiso duulaanka Ruushka ayaa xilligan dib u soo celinaya jooggitaankoodii diblomaasiyadeed ee dalkaasi.
Kan-xigaCiidamada Israel oo toogasho ku dilay...
Kan-horeKenya oo cabsi ka muujisay weeraro ka...
64,700,315 unique visits